विश्वको प्राचीन स्मार्ट सिटी अयोध्या :: Nepal Post Dainik विश्वको प्राचीन स्मार्ट सिटी अयोध्या | Nepal Post Dainik
विश्वको प्राचीन स्मार्ट सिटी अयोध्या
के भन्छ ऐतिहासिक दस्तावेज ?
झट्ट सुन्दा अँग्रेजी शब्द स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै यो पश्चिमा मुलुकहरुबाट सुरु भएको अवधारणा भन्ने लाग्छ । सोही अवधारणाको पछि लागेर नेपालमा पनि अहिले दर्जन बढी स्मार्ट सिटीका योजना तयार पारिँदै छ । सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरुले समेत यसमा काम गरिरहेका छन् । तर, यो स्मार्ट सिटी आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिले भारत वर्षमा नै सुरु गरिएको थियो भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।
स्मार्ट सिटी सबै सुविधाहरुद्वारा युक्त शहर हो । २०१७ मा अमेरिकी एक स्मार्ट सिटीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै विश्वको सबैभन्दा स्मार्टेस्ट सिटीको पहिलो नम्बरमा न्यूयोर्क शहर पारेको छ । त्यो सन् २००९ देखि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार चलेको शहर हो । तर, विश्वमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा भने २० औं शताब्दीको अन्तिम र २१ औं शताब्दीको सुरुदेखि नै तीब्र रुपमा अघि बढेको पाइन्छ ।
नेपालमा भने यो अवधारणाको बहस सन् २०१२ देखि भएको हो । सन् २०१२ मा ‘लुम्बिनी शान्ति शहर’को गुरुयोजना बनाउने समयमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रहरुको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित शहरको आवश्यकता बारे बहस भएको थियो । त्यही समयदेखि नेपालका अरु ठाउँमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउने बारेमा बहस सुरु भएको हो ।
विश्वमा कैयौं स्मार्टसिटी बनिसकेका छन् । पश्चिमाहरुले सुरु गरेको भनिएको स्मार्ट सिटीलाई हामीले पनि स्वीकारिसकेका छौं । यो समयखण्डमा आएर भारतमा के अयोध्या पहिले नै स्मार्ट सिटी थियो ? भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ । हुनत धेरै कुराहरु परापूर्व कालमा हामीले प्रयोग गरिसकेको विषयलाई कैयौं शताब्दीपछि पश्चिमीदेशहरुले अंगिकार गरेको पाइन्छ । त्यसैलाई फेरि हामीले उनीहरुको परिस्कृत शैलीलाई सिक्न थाल्यौं । स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि त्यही त होइन ? भन्ने विषयको बहस अहिले जारी छ ।
रामायणकालदेखि महाभारतकालसम्म अयोध्या नगर दुनियाँको सबैभन्दा शानदार शहर थियो भन्ने विषय पौराणिक किंवदन्तीहरुमा पाइन्छ । यी किंवदन्तीहरु धेरैहदसम्म सत्यताको नजिक पनि पाइन्छ । किनभने ईसापूर्व ३ हजार वर्षको सिन्धुघाँटी सभ्यतामा नै सुविधा युक्त शहर बन्नको लागि आवश्यक धेरै सामग्रीहरु भेटिएको छ ।
त्यतिबेला अयोध्या कोसल जनपदको राजधानी थियो । वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणको बालकाण्डमा उल्लेख भएको विषय अनुसार अयोध्यामा १२ योजन लामो र ३ योजन चौडा शहर थियो । सूर्य सिद्धान्त अनुसार एक योजनमा ८ किलोमिटर हुन्छ । वाल्मीकि रामायणमा अयोध्याको पुरै वर्णन गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ । अन्लाईन खबर